Ukujonga kwi-Mobile Mapper 100 - Geofumadas
NgoSeptemba, 2010 GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala
Kungekudala uAshtech uqalise imodeli yayo yeqela elitsha, eliboniswe kwiNgqungquthela yehlabathi ye-ESRI yakutshanje, ebizwa ngokuba yiT Mobile I-Mapper 100, eyinto yokuziphendukela kwemvelo kunye neempawu ze-Mobile Mapper 6 kodwa ngeenkcukacha eziphezulu kunezo ProMark3.
Enyanisweni, oku iqela ndiqwalasele ukuba Magellan iya kubamba kwiminyaka ezayo, oko ekugqibeleni waphula eli cebo evaliweyo PM3 leyo ngokuqinisekileyo iesile ukusebenza kodwa kuphela koko thina sonke imibuzo.
I-downside ye-Promark3 kukuba ayivumeli ukusetyenziswa kwezicelo zesithathu, kwi-case ye-ArcPad. Nangona umdlalo olula weesikrini kunye namanani obungakanani bamehlo kayise omkhulu kakhulu.
Kwakhona i-Promark yayineemingcele zokulayisha umthwalo we-raster, ngaphandle kokuba bebhendi. Kungenjalo iqela elikhulu, ukuba ikhebula liphathwa ngenyameko, esele isinike lona unomnye usuku.
Emva koko MobileMapper 6 Kwakunqamle ukuba yinkqubo engazange ixhase imvama ephindwe kabini, nangona ixhaswe emva kokuqhutyelwa phambili, ukufezekiswa kokuchaneka kwemitha emncinci kwakunciphise. Kwakungekho isiseko kwaye ngoko ubukhulu beenombolo eziza kubandezeleka, kubonakala ukuba zizuze i-100.
Yintoni efanelekileyo ye-MM100
Ukuchaneka. Ngokuqinisekileyo oku kubaluleke kakhulu, nangona iqela lilinganiselwa kuma-US $ 5,000. Phantse i-2,000 ngaphezu kwe-Promark kunye nexesha eliphindwe kane yi-MM6. Nangona baqinisekisa ukulungelelaniswa kwedatha ekubanjweni kwezibhamu kunye neengubo ezingaphantsi kokugcina ukuchaneka okuphezulu:
I-Minor ye-50 centimeters ngexesha langempela i-SBAS, ngaphantsi kwama-30 centimeters ngexesha langempela le-DGPS kwaye ngaphantsi kweyentimitha enye kunye ne-postprocess okanye kwi-RTK.
Izinto zeGNSS. Izinketho zokulungiswa ngokuhlukileyo zizinto ezintsha xa siqhathanisa ne-MM6 kwaye kunye ne-PM3:
I-45 efana nese-in-view-channels
-I-SAS: WAAS / EGNOS / MSAS
I-DGPS, i-RTK kunye ne-postprocess ne-MobileMapper Office
Ungathabatha idatha eluhlaza njengesiseko, kwaye ingaba yiRover.
Imiyalezo ye-NMEA 183
RTCM2.3, RTCM3.1, i-CMR kunye ne-CMR +, iDBEN,
I-ATOM (Lo ngumsakazo we-Ashtech obizwa ngokuba yi-Optimized Messaging)
Uncedisa iinkcukacha ze-RTK zenkampani yesithathu: VRS, FKP, MAC
Windows. Kwiilwimi ze-11 phakathi kwazo iSpeyin, apho ungayisebenzisa khona iArpPad nayiphi na enye ifowuni okanye isicelo sokuhamba esisebenza kwiWindows Mobile 6.5.
Software eyongezelelweyo. Iza ngeMephu yeMephu ebizwa ngokuba yi-Ashtech, i-GNSS Toolbox yokulawula i-GNS, i-Mobile Mapping Field kunye ne-Microsoft Office Mobile. Ngaphandle kwe-Internet Explorer, i-ActiveSync kunye neTranscriber yokuqaphela ukubhala ngesandla.
Ngokwexhumo, luzisa njenge-Bluetooth ye-MM6, kodwa sele isekela i-Wireless 802.11. Kwakhona isekela isiteshi sokungena.
Njengoko i-MM6 izisa ikhamera, i-compass sensor, i-microphone ukugcina kunye nesithethi.
Iza nekhadi le-256 MB kwaye ibhetri ye-lithium sele ihlawulwe ngeeyure ezintathu. Ukongeza, i-adapter ayisona into engaqhelekanga kodwa isitya se-AC yonke.
Ngamafutshane, i-real-time-metric equipment. Nditsho ubutsha, sifanele silindele umdlalo igama, kuba liquka Promark Promark 100 200 kwaye aziqonde ezo efanayo kodwa eriyali geodetic kunye software. Lowo ohlukileyo yi-Mobile Mapper 10, ehlaziywa ngakumbi ngokubanzi kule khowudi.
Akubukeka kakubi, nangona kufuneka uzame. Ukuba iMagellan kwenzeka ukuba yiAshteki, kwakhona ibuye ibe nguMagellan ibonakala iqalisa ukuzinza, nangona yathatha ngendlela enye okanye omnye ummeli womnye wemveliso. Kodwa kumava ezimbi ngamaxesha MMPRO, siye sabona ukuzala umthamo ngcono Ashtech, yaye silindele ngokutsiba Promark3 la maqela akuthethi kubenza lixesha ngokupheleleyo kangangokuba okwenzeka Pro.
Ulungele iP Pro, kodwa ulungelelanise ukuphatha iimpazamo zabo.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Farmville, eyona nto iphambili yeentanethi
Post Next Alibre, okuhle 3D kuyilo mechanicalOkulandelayo "
Iimpendulo ze-32 "Ukujonga kwi-Mobile Mapper 100"
isalvador perez uthi:
Molo, ndine-GPS yoxinzelelo lwe-spectra, imephu yomtya indibonisa impazamo njengoko ndiyenzayo ukuyivula okanye kufuneka ndithenge isoftware okanye ndibhalise kwenye indawo, kwaye yeyiphi i-eriyali endiyithengele i-gps spectra 10
Ndine-prescrion kwaye i-bnss yebhokisi yetshobo Andikwazi ukubona izilungiso ze-utm, ngaba uyakwazi ukuyiqwalasela?
Milton MILLADO CIPRIANO uthi:
Ndivela ePeru. Ndifumene i-GPS ye-SPECTRA L1 EFANELEKILEYO, kodwa isebenza kuphela neenkcukacha ze-GPS ndifuna ukwazi indlela i-GLONASS iqhayisa ngayo.
Ndiyabulela kakhulu impendulo.
NDIQINISEKILEYO UKUTHENGA ISIBHENGEZO SE-100, kodwa andazi ukuba INDLELA ENDE KM NDINGASEBENZA NGENKQUBO YOKUZIPHATHA. NDAFUNA UKUTHENGA IINGOZI ZOKULUNGISELELA UKUFUNDA, KUPHELA IZIQINISEKISO ZOKUQHUTYELWA KWE-Q BASED ON them, BABE NGOKUKHOLELWA KWEZIXABISO ZABO BONKE
okulungileyo kuba okokuba xa ulayisha i-2 gps ifowuni ye-mobile 100 ibonakala ekukhanyeni okuluphuzi omnye kunye nokukhanya okubomvu kwicala lakhe akufanele kubonakale umbala ofanayo wokukhanya ...
Juan Romero uthi:
hello Ndifuna iikhompyutheni kwividiyo yolawulo lwenkqubo yepro pos in Spanish isisombululo se-gsnn
Ndiyabona ndifuna ama-video tutorials ekulawuleni i-fild 100 ngesiSpanish
URafael Saez uthi:
Amagqabantshintshi abhekisa kumbuzo wesaveyi ofuna ukuyibuza nge-100 promarck kunye nezinye izixhobo zeGPS, kuyakufuneka uguqule iifayile zezinye izixhobo ezingaphucukanga kwifayile yeRINEX emva koko wenze emva kokuprinta kunye nenkqubo ye-GGSS yesisombululo se-ASterch. ithamsanqa
Hayi, kuthekani ... Andizange ndilapha ngethuba elithile ... kodwa andiyazi ukuba kuseyiluncedo ... ukuba unenayo ilayisenisi ye-post-processing ... ithengisa ngokuhlukileyo ...
Ngentsasa ekuseni ndifuna ukwazi ukuba i-postprocess eyenziwa njani kwi-100 mobilemapper okanye iqela lokubona iinkqubo kunye nokubonga
MARIO UROBERTO ARGEÑAL
Ndifuna ukulinganisela kunokunceda
Ndingayifumana 6 molibe Mapper kwaye azikhange zikwazi ukwenza inkqubo ye post-processing, ndiye kutshanje ndafunda ukuba le program okanye isoftware mvume ukwenza inkqubo sithuba omnye, njengoko cuendo ibhokisi activola log ekrwada ezimbi data ye post-processing, ndifumana ilayisenisi leyo esemthethweni.
Ndingayifumana 6 molibe Mapper kwaye azikhange zikwazi ukwenza inkqubo ye post-processing, ndiye kutshanje ndafunda ukuba le program okanye isoftware mvume ukwenza inkqubo sithuba omnye, njengoko cuendo ibhokisi activola log ekrwada ezimbi data ye post-processing, ndifumana le mvume ayikho semthethweni ngenxa yokuba usinika software.
umfazi wam unokuncedisa uncedo lwe-brirndarme kule nto
Ndiyathemba ukuba umbulelo uyawubulela
Molo, ndivela eColombia, endikhuthaza ukuba ndiwusebenzise njenge rover, enesiseko sepro sokuhlengahlengisa njengesiseko sendawo, ndiyayikhankanya ngoba yimigangatho ephezulu yomhlaba ongenamntu kwiinkqubo zokungenisa izishumi umzekelo (ndisebenzisa iplate yejometiki kwaye kuyo ndibeka indawo pro njengesiseko ngelixa ndenza umjikelezo ngeMM100 emva ngefayile yazo zombini i-rover kunye nesiseko endisisebenzisayo kule meko ndenza ukuphinda ndihlehlise ...) kolu hlobo lomzekelo ukuba u-rover ucebise ukuba undinike iziphumo ngocoselelo oluphambili lokuhlehlisa umsebenzi.
okanye ukuba unengcamango engcono yendlela yokwenza uphando olukhankanywe ngaphambili
omnye umbuzo ukuba ndiyakwenza phantsi kwalo mgaqo ungasetyenziselwa ukubopha izilungiso
okanye ngaba unokuthabisa ukuthenga ezimbini i-MM100 ukusebenzisa enye njengesiseko kunye nomnye njengengqungquthela, siyabonga ngqalelo
Asithengisi. Kuya kufuneka ufumane umhambisi kwilizwe lakho.
uJohann silva uthi:
Zingakanani iindleko kunye nendlela yokuhlawula ngayo
wilma del rocio barragan clavijo uthi:
Ndicela isicatshulwa, indlela yokuhlawula, ukuhanjiswa kwangoko kwezixhobo, eziqinisekisa ukubonelela, ukuba ikhona, iMapper 100, iMapper 10.
I-imeyile: topografiapozosparaagua@gmail.com, topografiaworldservices@gmail.com, wdelrbc@hotmail.com
lava emaphandleni i-hernandez uthi:
I-maperta ephathekayo i-100 isebenza ngeengcaphephe zophando
i juanma uthi:
Ndifuna ukwazi ukuba kukho nayiphi na i-application mapper application engasetyenziswa kwi-ipad okanye iphon
Ewe inokwenzeka, kodwa ukuchaneka kwayo akonelanga. Ukuhamba kufuna isentimitha okanye ukuchaneka kwesimilimitha, ngakumbi ukuba ngaba ziziza.
Ndiyabulela ukuphawula kwakho, inceda kakhulu eMexico kwaye ndivuyiswe kweli phepha lucky
Makhe sibone ukuba ngaba ndaqonda kwiindawo:
-A GPS Map Mapper 100 idinga ilayisenisi yokuthunyelwa kweposi, ukuze idatha ayithathe ingalungiswa ngokusebenzisa le ndlela.
- Kuya kuqhubeka ngokuchanekileyo ngakumbi ukuba kulandelelwano oluchanekileyo nedatha ethathwe kunye nezinye izixhobo okanye i-database yangaphakathi kunokuba idibane neRinex.
-Kule ndawo kukho amanqaku ambalwa abonisa indlela eyenziwa ngayo emva kokuqhutyelwa kweposi usebenzisa i-Mobile Mapper Office, zombini usebenzisa i-Mobile Mapping kunye ne-Mobile Mapper Office.
Ulungele umhla onokundinceda ngicela ngeminye imibuzo:
Ndingayifumana 100 MobileMapper kunye ArcPad ... kodwa mna postprocessing Ungacebisa ukuba imvume postprocessing ukwenza uhlengahlengiso ezilandelayo kwi PC lam okanye I ukulanda data RINEX ukuba uyibophe kamva ngaphandle kokuba ufumane postprocessing mvume ... okanye kum ngaphezulu kububulumko ukuba athenge okanye ikhowudi postprocessing iphuma efanayo inezilungiso okanye khowudi esebenzayo ... .ukuba ikhowudi luvuliwe ngaphandle ikhodi kusebenze ungandixelela indlela enze postprocessing evela RINEX dator ubuza, inguqu data RINEX ukuba Ashtech phezulu idityanisi yedatha yee-GPS kunye nedatha inikeza i-enex ... okanye njani inqubo kwi-mobilemapper ofisi.
ngokubonga isiwaka esibulelo kunye nokubuliswa okuvela kum mexico
Kulungile ukusa, umbuzo wam ukuba ngaba nge-MM100 ndiyakwenza i-stakeout eyisiseko, njengomzekelo wokubambisa izicwangciso, ngokuqinisekileyo ukondla ngamaphuzu angempela.
Kuxhomekeka kwisicelo osifunayo. Ngokwesiqhelo kucwangciso lwanele (umlinganiso weplani), ukuba idatha iphinde yagqitywa, kodwa ukuba ngumsebenzi we-altimetry, njengokuvelisa umhlaba wokwenza uyinkcenkcesho okanye ukubanga ibanga lendlela, ukuchaneka kokuphakama Akwanelanga, kuba ukubala kwamasentimitha alishumi xa uyila itshaneli okanye uphawula ukusikwa.
Ulwaphulo-mpahla, i-ideal isiteshi epheleleyo, i -ododite yesiqhelo okanye izinga lokuchaneka.
Rochin .. uthi:
Hi G. Ngaba ineqela le-MM6 ngokuphumelela, ngaba ucinga ukuba eli liqela leMM100 liyakwazi ukufikelela ezi ngcaciso, ukuze likwazi ukusebenza njengeqela elithembekileyo lophando lwezobugcisa ... Siyabonga
Ndiya kuncoma i-Garmin GPS Imephu 62st. Andiyithembi uMagellan. Ingumzekelo wam.
Kule njongo, izixhobo ziya kusebenza ngokugqibeleleyo kuwe.
Ndiyi-botanist, andifuni ukuchaneka komcebisi kwaye ndacinga nge-Magellan Triton. Ucinga ntoni?
Kuyinyani ngokupheleleyo. Intambo ibonakala ibuthathaka kakhulu kwinxalenye edibanisa i-eriyali, ifuna inkathalo enkulu.
Njengekhebula le-USB lesikhululo esipheleleyo, ukuba sisidenge, ngokuqinisekileyo ayisebenzi. Kuyabiza ukuzithenga ngawedwa, ngapandle kwabo bathabatha ukufika ukuba akukho bukho.
Kwaba lixesha bathabatha zonke ezo zinto. Ububi balezi zixhobo zixhobo.
NdineMM6 kwaye ndisebenza kwiimeko ezigqibeleleyo zokusebenza, kunye nexesha ezi zixhobo zibalaseleyo kwaye zinceda ngakumbi kubantu asebekhulile, nincoma ngokudala izinto ezintsha, niqhubeke.
UThixo Usikelele Bonke